Chiporofita Uye ZveMweya Zvinoreva Zvenguruve - Zvinoreva Zvemubhaibheri
iphone haina kurira mushure mekuvandudza
chengetedza muripo ruzivo rwekushandisa chitoro
chinja ku & t foni
Chiporofita uye zvemweya zvinoreva mazizi, Chii chinoratidzirwa nemazizi?
Chii chinomirirwa nemazizi muBhaibheri
Zizi nderimwe reshiri dzehusiku, uye kuvanhu vechiJuda imhando yeshiri inonzi haina kuchena, uye haina kukodzera kudyiwa sekudya. Mazhinji emhando idzi anowanikwa muIsrael, uye anotaurwa muBhaibheri senge mumabhuku:
Isaya 14:23, 34:15
Zizi ishiri inogara ichienda kunzvimbo dzakaparadzwa zvachose, uye inowanzo kutaurwa muMagwaro Matsvene sechiratidzo chekuparadza, kuparadza, kusuwa uye kusurukirwa.
Mazizi muPalestine anogona kuonekwa kana kuwanikwa mumiti nemakwenzi, asi zvakare anogara muzvivakwa zvinosiiwa munzvimbo dzakaparara uye dzakasurukirwa. Zita mumutauro wechiArabic werudzi urwu rwe shiri, iyo Zizi, zvinoreva amai vematongo.
Mubhuku ra Mapisarema 102 , munyori wepisarema anozvinongedzera kwaari sezizi diki rinobva kunzvimbo dzakaparadzwa nekuda kwedambudziko rekusurukirwa raaisangana naro panguva iyoyo. ( Pisarema 102: 6 )
Panyaya yechiporofita chemuporofita Isaya anotsanangura kupera kunoparadza kweguta reEdhomi, achitaura nezveMazizi anogara imomo, aifananidzira dongo renje raizove rudzi irworwo. Rudzi rweEdhomi nevaEdhomu vanogara, voga, vakaguma zvachose kuvapo.
Chiporofita chinotaura sezvizvi:
Hunguzungu nehuku zvichagaramo, uye mazizi ane makungu marefu nemakunguo zvichagaramo. Achatambanudzira pamusoro pake tambo yekuyera yekushaiwa chinhu Uye rwodzi rwokuyeresa rwokuparadza. (Isaya 34:11)
Mazizi akaiswa pakati peshiri dzinoonekwa sedzisina kuchena, uye dzaisave, sezvakatsanangurwa naMwari pachaKe, dzaida kuitirwa nevaIsraeri, kana nechero ani zvake munyika. Izvi zvinowanzoitika, shiri dzese idzo dzakadya nyama kana dzakafa hadzifanirwe kudyiwa, nepo shiri dzinodya zviyo senge huku dzaigamuchirwa nekudyiwa nevaIsrael.
And you have have among among among among,,,,,,,,,,,::: And: And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And
Gondo, gora, the osprey , kiti, rukodzi maererano nemarudzi adzo, gunguo rega rega zvichienderana nerudzi rwayo, mhou, gora rousiku, seagull, zizi, gora, ibizi, huku yemvura, gora, gora, shuramurove kumarudzi ayo, hoopoe, uye chiremwaremwa. (Revhitiko 11: 13-19 VRS) .
Tsvaga kukosha uko tsika dzakasiyana dzenyika dzinopa kune iyi mhuka inoyera
Chii chinonzi zizi chinomiririra. Zizi imhuka inofungidzirwa se murevereri pakati penyika yeruzivo neye mweya mutsika dzakasiyana dzenyika. Zve Mwarikadzi wechiGiriki Athena, semuenzaniso, icho chimwe chinhu chitsvene uye inoenzanisirwa mune mamwe maGirisi nemaRoma mari sechiratidzo che chinzvimbo, ungwaru uye hupfumi.
MuEjipitori yekare, maCelt, maHindu uye tsika, chirevo chekufananidzira cheZizi chakatenderedza kuchengetedzwa kwepasi uye kuchengetedzwa kwevakafa. Mune maonero aya, Zizi raive mutongi wehusiku uye muoni wemweya. Iyo Owl se totem iri huchenjeri, chakavanzika, shanduko, mameseji, ungwaru, chishamiso, dziviriro uye zvakavanzika.
MaIndia ekuAmerica anobatanidza zvinoreva Zizi uchenjeri, kufanoona, uye zvakare kwavari, ndiye mutariri wezivo dzinoyera. Izvi zvinonyanya kuve nekuti Owl ndiye anofungidzira mamiriro ekunze. Zvakare, kugona kwake kuona husiku ingano pakati pevaNative America, uye hunhu uhwu hunodanwa panguva yemitambo yemashiripiti nekuti Zizi rinotorwa seshoko rekuchenjera reruzivo rwepachivande. Saizvozvowo, kuWest Africa uye tsika dzevaAborigine veAustralia, vanowana Owl se mutumwa wezvakavanzika.
Iro Zizi Rouchenjeri Chiratidzo
Owl huchenjeri Bhaibheri. Chiratidzo chew Owl chinoreva. Nhasi uno zizi rinotumira kunzwira tsitsi uye kwakanaka vibes chave chiratidzo chehungwaru uye intuition , uye zvinofungidzirwa kuti kusangana neasina kujairika kunogara kuri chiratidzo chezwi rakanaka. Anofanotaura rombo rakanaka munharaunda dzese, kunyanya mune rehupfumi.
Kunyangwe kuchamhembe kweEurope, ichiri kudavirwa kuti nekutarisa kwazviri zvakatarisana, inoratidza simba rayo risinganzwisisike uye njere uye intuition. Muzivi weGerman Friedrich Hegel akagamuchira zizi sechiratidzo cheuzivi
Kurongeka kana kurongeka kweiyo yakavhenekerwa yeBavaria inotora zizi kana zizi sechiratidzo sezvo ichimiririra huchenjeri uye Illuminati vanozviona sega vega vakangwara zvakakwana kutungamira nyika uye nhasi chiratidzo cheBohemian Grove Club.
Chii chinoreva chiratidzo chezizi?
Zvino tichaona kuti chiratidzo chezizi chinoreveiuye ndeapi mazizi anomiririra.
Chii chinoreva zizi? Icho chiratidzo, mune ino kesi yeo owl, inopindura kuchiratidzo uye kududzirwa kwetsika yega yega kana hukama. Naizvozvo isu tinobva tafurira mumwe nemumwe wavo.
Owl mumari yechiGiriki: Chiratidzo chefuma nekubatana neimwe nyika.
MuChiKristu chePakati Makore: Inomiririra mweya wesango, zvakare kuberekwazve kwen'anga nevaroyi.
Owl weiyo Illuminati: Chiratidzo chinoshandiswa kune dzimwe tsika, pamwe zvakare zvine chekuita nekuwana huchenjeri.
Owl yevaAmerindian: shiri idzi dzine mweya unoshamisa unobvumidza shaman kuti ipfuure nepanogona kupindira nyika yevanhu, ichiziva chero mhuka, zvinogoneka, rwendo kune dzimwe ndege dzekuziva.
Winnie the Pooh Owl: Ruzivo rweiyo yekare sage kuburikidza nemabhuku.
Owls eMayas: Mutumwa wezviratidzo zvekuparadza, anonyevera.
Mazizi evaDruid: Kudzivirirwa sezvo ichidzivirira.
Owls muIndia: Kuporesa.
Owl Amulet yevadzidzi: Inofananidzira njere uye kudzidza.
Zizi mumatanho eMason: Misangano yakavanzika, kuberekwazve.
Mazizi muIsrael: Mashura akanaka, nekuti anovhima mhuka dzinokanganisa minda.
Zvinorevei zizi nehove?
Ungada here kuziva zvinoreva zizi nehove? Zvakanaka saka tinoongorora zvishoma pane ino nguva:
Zizi uye zizi: kuchema, dongo, kugara murima rechitadzo. Iyi dudziro inoita kunge inotorwa kubva mukufunga kwepakati. Zizi nemazizi muroyi uye muroyi mukusangana kwakavanzika kwemweya yavo musango, vakasiya miviri yavo yevanhu.
Ngano yeruzivo rwemashiripiti evaroyi nevaroyi inoita kunge izere nehupfumi, uye dudziro yeesoteric inogara ichifungidzira.
Kurota zizi kana zizi zvinoratidza kuti tinofanirwa kungwarira uye kuti tiri kutsvaga chimwe chinhu chitsva, muchiitiko chekuti kurota kwacho kunoita kuti tinzwe chimwe chinhu chakanaka, asi kana tichifunga chimwe chinhu chisina kunaka inogona kunge iri yambiro yechinhu chisina kunaka; matambudziko ehutano.
Kana pakurota zizi kana zizi rinotitarisa nemutsa rinomiririra munhu wepedyo anotidzivirira, pane zvinopesana, kana vakatitarisa zvisina kunaka. Izvo zvinodikanwa kurova zizi kutarisana nemamiriro ezvinhu kana risina kudzikama kana hushamwari.
Kuva nezizi kana zizi kumba chitaviridzo chinodzivirira.
Chii chinorehwa nezizi?
Kana iwe uchida kuziva kuti zvinorevei zizi, iwe unofanirwa kuziva kuti ishiri yemhando imwechete semazizi. Zvakadaro, haina minhenga inoita senge nzeve, asi kuti ine chimiro chemoyo chakasimbiswa pachiso chayo, mune chimiro chayo chakanaka vane hukama nerudo, nekuti nemaziso erudo zvinokwanisika kuona murima uye kwete inzwa kutya.
Inokwezva rombo rakanaka mune zvemari, zvakafanana neazizi, ivo vanokwezva rombo rakanaka zvakare murudo, maererano neshamanism.
Chii chinorehwa nezizi kumagweta?
Uye pakupedzisira tichataura nezve izvo zizi rinoreva kumagweta, uye ndezvekuti zizi sechiratidzo uchenjeri maererano nekufananidzwa nemumiriri wekare, uyo, maererano nezvidzidzo zvevakadzidza mumunda, harizi zizi asi zizi.
Zvisinei, zizi kana zizi maererano netsika yechinyakare, shiri idzi dzinomiririra kunaka kwehungwaru, uye magweta anoishandisa kumiririra mutongi akanaka.
Meseji dzakavanzika, zviratidzo zvehungwaru, zvakanaka kana zvakaipa, zizi nemazizi zvinomiririra rombo rakanaka nerudo. Kudzivirirwa chinyakare vanhu akarangarira tsika: zvechokwadi zvinoreva, shaman, vatongi, classical kufunga, jekeso njere.
KUKOSHA KWEBHAIBHERI NOKUDZIDZA PAMWEYA KWEZVINHU
CHII chinonzi PROPHETIC INTERCESSOR?